मुख गन्हाउने अर्थात् सास गन्हाउने समस्याका कारण धेरै मानिस पीडित हुन्छन् । सास गन्हाउने समस्या भएका व्यक्ति अरु व्यक्तिसँग बोल्दा पनि मुख हातले छोपेर बोल्नुपर्ने हुन्छ र ठाडो सिर पारेर बोल्नै गाह्रो हुन्छ । स...
ओखरको नियमित सेवनले पुरुषको शुक्रकिटलाई स्वस्थ बनाउने पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । बायोलोजी अफ र्र्रिोडक्सन जर्नलमा छापिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार दिनमा दुइ मुठी जति ओखरको गुदी खानाले तन्नेरीहरुको शुक्रकिटला...
महिलाको स्वास्थ्यको बारेमा धेरै कुरा लेखिएका छन तर यसको साथ महिलाको यौन सम्बन्धसँग गाँसिएको स्वाथ्यको बारेमा कसैले केही भन्दैनन् । महिलाको लागि अति नै महत्वपूर्ण जानी राख्नुपर्ने कुरा यो छ कि यौन सम्बन्धका...
dash; जाडो याममा बिहानको चिसोमा सकेसम्म हिँड्डुल नगर्दा नै धेरै फाइदा हुन्छ । हिँड्डुल गर्नै पर्ने भए न्यानो लुगा, टोपी लगाएर बाहिर निस्किनु उचित हुन्छ । – बन्द कोठा भित्र बसेर आगो वा हिटर नताप्...
जानि राखौँ, महिलालाई रिस उठ्ने कुराहरु !
महिलाले आफूसँग रहँदा आफ्नो साथी आफूसँग मात्र भुलोस् भन्ने चाहना राख्छिन् त्यसैले सँगै रहँदा पुरूषले फोनबाट अरूलाई सन्देश पठाउने फोन गर्ने तथा अन्य अफिसका काम गर्ने गरे महिलालाई रिस उठ्छ । महिलाले आफ्नो साथी...
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पहिलो तलब कान्तीको कोषलाई
स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले आफ्नो पहिलो महिनाको तवल कान्ति अस्पतालमा रहेको आंकोलोजी कोषलाई दिएका छन् । मन्त्री भएपछि अस्पतालहरुको निरीक्षण गर्ने क्रममा सवै भन्दा पहिला कान्ति अस्पताल पुगेका थापाले त्यहा...
जाजरकोट, ६ मङ्सिर
जाजरकोट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आधुनिक डेन्टल सेवा सुरु गरेको छ । दाँतसम्बन्धी सबैखालका समस्या समाधान हुने कार्यालयका निमित्त प्रमुख चाँदनी जैसवालले बताए । सो सेवाका लागि आवश्यक आधुनिक उपकरण जुटाइएको छ ...
झापा, ५ मङ्सिर
डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट बिरामी भएका एकजना भारतीय मजदुरको मृत्यु भएको छ । दमक–१५ स्थित राजु श्रेष्ठको घरमा मार्बल मिस्त्री काम गरिआएका भारत, सिलगुढी घर भएका ५५ वर्षीय जीवन रायको मृत्यु भएको हो । रायसहित भार...
कर्णाली अञ्चलका बालबालिकामा हुने कडा खालको कुपोषणको उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बहिरंग सेवा संचालन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा अञ्चलभरीका ५० वटा स्वास्थ्य चौकीमा कडा ...
चितवन, ३ मङ्सिर
चितवनमा डेङ्गु रोगबाट एक बालिकाको ज्यान गएको छ । नेपालमै सबैभन्दा बढी डेङ्गु रोगको सङ्क्रमण देखिएको चितवनमा यो आर्थिक वर्ष लागेपछि डेंगुबाट मृत्यु भएको यो पहिलो हो । पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिकाकी ११ वर्षी...
रोल्पा, २ मङ्सिर
रोल्पा जिल्लामा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आउने बिरामी पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या अधिक देखिएको छ । जिल्ला अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रका अलावा समयसमयमा सञ्चालन गरिने स्वास्थ्...
१६ स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक बिहिन
सरकारले सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पुगेको भनी गरेको दाबी गलत भएको पाइएको छ । बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएकोे ‘आव २०७२÷७३ मा सम्पादित स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमको राष्ट्रिय वार्षिक...
बैतडी, ३० कात्तिक
मुटु रोगी छोराका आमा बसन्तीको प्रश्न ‘म कुन देशको नागरिक हो सरकार ?’
आर्थिक अभावमा मुटुका बिरामी एक बालकको उपचार हुन सकेको छैन । खर्च अभावमा देहीमाडौ–८ मा बस्दै आएकी वसन्तीदेवी ऐरका पाँच वर्षीय छोरा सञ्जीवको उपचार हुन नसकेको हो । श्रीमान् र घरपरिवारले वास्ता नगरेपछि छोरा...
काठमाडौ, २९ कात्तिक
गर्भावस्थामा अधिकांश महिला यौन जीवनबाट टाढा रहन रुचाउँछन् । यद्यपि नौ महिना नै सहबासबाट टाढा रहनु उचित होइन । केही कुरामा सतर्कता अपनाए गर्भावस्थामा पनि यौन सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ । गर्भावस्था...
चितवन, २९ कात्तिक
गरिब बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिन बजेट अभाव भएको जनाउँदै आएको यहाँको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अनावश्यक खर्च प्रशस्त भएको पाइएको छ । अस्पतालमा दसैँ, तिहार र विश्वकर्मा पूजामा प्रसादका लागि मात्...
काठमाडौ, २८ कात्तिक
आईओएमको डिनमा डा. केशबप्रसाद सिंह
त्रिभुवन विश्व विद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमको डीनमा केशवप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले डिन सर्च कमिटीको सिफारिसका आधारमा सिंहलाई डीन नियुक्त गरिएको ...
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, २७ कात्तिक
विश्व स्वास्थ्य सङगठन र युनिसेफको एक प्रतिवेदनका अनुसार विश्वभरी अहिले पनि दादुराका कारण दैनिक झण्डै चार सय जना बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । सन् २००० देखि २०१५ सम्मको अध्ययन गर्दा दादुराबाट मृत्यु हुनेहर...
जानि राखौ, कस्तो कस्तो लक्ष्ण देखिएमा गर्भ रहेको हुन सक्छ ?
गर्भरहेको २८० दिन अर्थात पुरै नौ महिना दश दिन भित्र अनेक प्रकारका रोग लाग्छ । – मुख्य रुपमा जीउ भारी हुनु, – उल्टी आउनु, – मुखमा पानी भरिएर आउनु, – छात...